Elneny Oo Markii Ugu Horeesay La Hadlay Taageerayaasha Arsenal, Kadib Dhaawacii Kasoo Gaaray Kulankii West Ham – Gool FM
(Premier League) 23 Abriil 2018 Ciyaaryahanka khadka dhexe ee kooxda Arsenal Mohamed Elneny ayaa fariin mahad celin ah u diray dhamaan taageerayaasha Gunners, kadib garab istaagii ay u sameeyeen dhaawacii kasoo gaaray kulankii West Ham ee horyaalka Premier League.
Mohamed Elneny ayuu dhaawacan ka soo gaaray canqowga inta lagu gudi jiray kulankii shalay ee West Ham, wuxuuna awoodi waayay in ciyaarta uu sii wato isagoo badal lagu sameeyay kahor dhamaadka qeybtii hore ee ciyaarta.
Xidiga xulka qaranka Masar ayaa la filayaa in uu dhaawacan soo gaaray kaga maqnaado garoomada mudo dhan 3 isbuuc, sida uu daboolka ka qaaday xiriirka kubada cagta ee dalka Masar, kadib marka ay xiriir la sameeyeen Elneny.
Mohamed Elneny ayaa kusoo qoray bartiisa Instagram-ka: “Waad ku mahadsan tihiin dhamaantiin jaceylka aad ii muujiseen, gudaha garoonka iyo dibadiisaba”.
“Garab istaagiina ayaa ii fududeenaya inaan si dhaqsaha u soo kabto, waxaana u dagaalami doonaa sida aan dib ugu soo laaban lahaa garoomada, si aan kaga qeyb galo kulamada u harsan Arsenal, isla markaana aan u caawiyo xulkeyga qaranka”.
Goolhayaha Liverpool ee Simon Mignolet oo si xun u bahdilay Harry Kane kadib abaal marintii uu ku guulaystay Salah